Oseyisilomo soZalo uthi wayengaqondile ukuba wumlingisi
UTHUTHUKA Mthembu uthi wayengaziphuphi engumlingisi odumile. Isithombe: Sithunyelwe
Alyssia Birjalal | July 28, 2020
UMLINGISI waseGoli, uThuthuka Mthembu, uthi wathola ingqayizivele yethuba ngokunikezwa indawo ephambili kulo mdlalo owuchungechunge obukwa kakhulu eNingizimu Afrika, Uzalo ngoDisemba 2018.
Lo mlingisi oneminyaka ewu-22 uthe yena wayengakaze waziphupha enza lomsebenzi wokulingisa kodwa kwathuka ucilo uzishaya esagileni.
UThuthuka udlala indawo yomlingiswa onguNonka, okuyintombazane eneminyaka engu-18, ehlala KwaMashu futhi ezididekele ngoba ayazi ukuthi kufanele ikhetheni phakathi kothando nemfundo.
"Yingqayizivele yethuba kwithelevishini futhi ukuba semdlalweni obukelwa kakhulu ezweni yimpumelelo enkulu kimina. Angikaze ngakufundela ukulingisa kodwa ukuthekela ulwazi kwabanye ozakwethu nasekufundeni kwindima yezokulingisa yilona hlelo engizicija ngalo. Ngibusiswe ngale ndawo futhi ngicabanga ukuthi uma nje ngisenza into engiyithandayo, ngizobe ngifeza iphupho lami." Uthe indima yezokungcebeleka inezinselelo eziningi njengokuzama ukwamukela udumo.
"Ngolunye usuku ngangiwumuntu nje ojwayelekile, manje sengidumile. Inselelo kimina ukuthi kwakufanele ngifunde ukwamukela uguquko ukuze ngingabi nenkinga emphakathini nokuthi umsebenzi wami udinga ngenzeni. Ukubhekana nabantu noma ngingingabhekani nabo kwayiguqula kakhulu impilo yami. Yinto engisazama ukuzijwayeza yona."
Uthe kule ndima ubukela kakhulu abantu abanjengo-Oprah Winfrey, Ava DuVernay nabanye osaziwayo bakuleli abanjengoDawn Thandeka King. Uthe ukuze uhlale isikhathi eside endimeni yokulingisa kufanele ube wumuntu ofundisekayo.
"Uzohlale uthola ukugxekwa kukho konke okwenzayo. Kuzohlale kunabantu abakuzondayo. Udinga ukwamukela ukugxeka kkwakhayo ukuze ubhekane kahle nenselelo," kuphetha uThuthuka.